Aza kivikivy izany. Ny vitan’ny hafa ve tsy ho vitantsika e ! Alefa foana, hoy aho. Ny tena zava-dehibe anie dia ilay ekipantsika mivoatra sy ianareo mahita sera milay kokoa noho ny teo e ! Voninahitry ny tanàna daholo izany. Aza kivikivy mihitsy ianareo ! Andrasanay aloha ny tanàna fa ianareo mandehana, hoy ny zandrikely eto an-tanàna. Ento mody, hono, ny amboara e ! Mino izahay fa tena afaka mahavita an’izany ianareo a ! Nihoatra ny neritreretina mantsy no efa vitanareo hatramin’izao. Alefa Jean a !